About Us - Shanghai Pamaens Teknolojia Co., Ltd
Shanghai PAMAENS TECHNOLOGY CO., LTD, specializes amin'ny ny R & D, famokarana ary ny varotra ny angovo-fanafanana fahavaratra ary fiarovana vokatra. PAMAENS manome fametrahana, fiofanana sy Ankehitriny-fivarotana iray-mijanona fanompoana. PAMAENS Lasa ny mpitarika eo amin'ny sehatry ny angovo orinasa fangatahana-mamonjy fanafanana ny teknolojia ao Shina sy tany ivelany.
Ny tena vokatra ireo ao anatin'izany ny insulation palitao, tanky & amponga heaters, infrared heaters, cartridge heaters, coil heaters, tubular heaters, tanimanga tarika heater, Mika tarika heater, natsipy-in heater, rivotra sy rano tony tony heater tarika heaters etc.
Ny insulation palitao, tanky & amponga fanafanana palitao sy ny mandroso izahay infrared heaters tsy tena mampihena angovo, amin'ny alalan'ny fampitomboana ny mafana fahombiazana, fanatsarana ny kalitaon'ny vokatra sy miasa tontolo iainana. Ankoatra izany, ny vokatra dia azo antoka ny fampiasana, tia namana ny tontolo iainana, mora ny hametraka amin'ny fampiasana intsony ny fiainana, azo antoka sy azo itokisana fampisehoana. Ny insulation palitao & bodofotsy dia be nampiasaina tamin'ny valves, flanges, fantsona, plastika milina, dryers, exchangers, sns rafitra setroka Drum & tanky heaters dia ampiasaina mba nafanaina ranon-javatra isan-karazany toy ny rano, fitaovana simika, tantely, menaka, lakaoly etc.
Fanafanana singa, toy ny cartridge heater, coil heater, tubular heater, tanimanga tarika heater, Mika tarika heater, natsipy-in heater, rivotra tony heater sy rano tony tarika heaters, izay azo ampiharina eo amin'ny varingarina fanafanana ny samy hafa rehetra plastika milina, anisan'izany ny extrusion, tsindrona koronosy milina, tariby sary milina, pelletize, tsofina filming milina, fanodinana plastika sy vulcanizing milina, sns Miantehera amin'i efa be induction fanafanana nandritra ny taona maro ny teknolojia sy ny traikefa amin'ny famokarana ny nentin-drazana heaters, matoky isika hanatitra kalitao avo sy Price tsara induction heaters, miaraka amin'ny tsara eo anatrehan'ny varotra fiofanana sy taorian'ny asa varotra.
Ankehitriny dia manana ny dokotera maro, tompo sy ny zokiny injeniera, izay nanolo-tena ho R & D in herinaratra teknolojia. Ankoatra izany, PAMAENS miara-miasa amin'ny kolejy sy ny oniversite any Shina. Amin'ny fahatakarana lalina ny milina isan-karazany eny an-tsaha, PAMAENS ny hanao izay fampivelarana induction heaters ho an'ny fampiharana hafa
PAMAENS manana ny fanahin 'ny tsy mivadika, fanirian-daza fatratra, fahombiazana sy ny tsara indrindra. Maka angovo fahavaratra isika, tsy ho toy ny asa ara-tsosialy ihany koa, fa andraikitra sy miverina ho an'ny tanindrazana. Tso-po noho ny aminareo rehetra, ary manantena ny hiara-miasa amin'ny orinasa ao Shina sy any ivelany hanangana ivo iray ho tsara kokoa miaraka iombonana hoavy.
PAMAENS efa nahazo taona ISO9001 sy RoHS mari-pankasitrahana. Azo ampiharina sy ny fitsapana henjana fanaraha-maso ny biby rehetra anjara tokana ny vokatra ary koa isaky ny dingana fikarakarana. PAMAENS dia alalana ny fanafarana sy fanondranana vokatra rights.The no amidy any Eoropa, Moyen-Orient, Azia Atsinanana Atsimo, Aostralia, Etazonia, sns Taiwan nanao isika hanatitra:
Kalitao avo entana
Free fanofanana ny fametrahana sy fikojakojana
Taona iray Warranty
OEM sy ny famolavolana tolotra